DAAWO:Somaliland oo degmo u dhow Garowe ka samaysay arin aan laga fileyn
February 29, 2020 Farah Abdikadir Mohamed 1
LAASCAANOOD(P-TIMES)- Wasaaradda Dhalinyarada iyo Ciyaaraha Somaliland ayaa degmada Boocame ee gobolka Sool koob ugu qabtay naadiyaasha ka ciyaara safka hore ee degmadaasi, waxaana munaasibadii koobkaasi lagu qabanayey ka qayb galay Isuduwaha wasaaradda Dhalinyarada iyo Ciyaaraha Somaliland Shucayb Yuusuf Dirir, gudoomiyaha iyo gudoomiye ku xigeenka degmada Boocame, dhalinyaro iyo qaybaha kala duwan ee bulshada.
Isu duwaha wasaaradda Dhalinyarada iyo Ciyaaraha Somaliland oo hadal ka jeediyey munaasibadaasi ayaa sheegay in Somaliland ay haatan wixii ka dambeeya horumarin doonto degmada Boocame iyo dhalinyaradeeda, isagoona xusay in isbadal weyn lagu sameyn doono qaabka Sports-ka gobolka iyo kan degmada Boocame.
Gudoomiyaha iyo gudoomiye ku xigeenka Boocame ee Somaliland oo iyagu dhankooda munaasibadaasi ka hadlay ayaa sheegay in dhalinyaradu ay tahay cududa kaliye ee la isku halayn karo isla markaasna dalkasta dhalintiisu ay horumariso dhalinyarada Boocamena laga filayo arintaasi oo kale.
Waa markii ugu horaysay ee degmada Boocame xubno ka tirsan maamulka Somaliland ay ku qabtaan koob ciyaareed, waxaana munaasibadii koobkaasi lagu dhigayey amaankooda sugayey ciidamo ka tirsan kuwa Booliska Somaliland.
Degmada Boocame ayaa dhacda duleedka Garowe, waxaana mar qabsatay Somaliland hasa yeeshee loolan u dhaxeeyey muddooyinkii ugu dambeeyey Puntland iyo Somaliland ayaa lagu kala awood roonaaday.
Naagu ninkii dhaba ayey taqaan. Reer puntland in ay ku dhabaan baa fiican sii aad puntland ugu mashraxleedeysid